I-Biography yePol Pot - Inkokheli yeKhmer Rouge
Biography ye Pot Pol
by UMichael Richards, uMbhali oXhasayo
Inkokheli yeKhmer Rouge
Njengentloko yeKhmer Rouge, i-Pol Pot yayijongene nesilingo esingenakuze senzeke kwaye sinobudlova ukususa iCambodia ukusuka kwihlabathi lanamhlanje kwaye senze i-utopia yegrarian. Ngelixa uzama ukudala le nto, uPol Pot wenza i-Cambodian Genocide, eyaqhubeka ukususela ngo-1975 ukuya ku-1979 kwaye yabangela ukufa kwabantu ubuncinane bama-Cambodia ama-1.5 kwizigidi ezi-8.
Imihla: Meyi 19, 1928 (1925?) -Aprili 15, 1998
Yaziwa nangokuthi: uSaloth Sar (ozalelwe); "Umzalwana one nombolo"
Ubuntwana kunye noLutsha lwasePol Pot
Indoda eya kuthiwa yayaziwa ngokuba yiPol Pot yazalwa njengoSaloth Sar ngoMeyi 19, 1928, kwidolophana yasePrak Sbauk, kwiphondo yaseKong Thom, kwiyiphi i-Indochina yesiFrentshi (ngoku iCambodia ). Intsapho yakhe, inzala yaseTshayina-Khmer, yayithathwa njengento efanelekileyo yokwenza. Kwakhona badibanisa nentsapho yasebukhosini: udade wayengumncinci wenkosi, uSisovath Monivong, kunye nomzalwana wayenkundla yesigqeba.
Ngomnyaka we-1934, uPol Pot wahamba waya kuhlala nomzalwana wasePnom Penh, apho wachitha khona iminyaka kwiindwendwe zasebukhosini zaseBuddhist waza waya kwisikolo samaKatolika. Xa eneminyaka eyi-14 ubudala, waqala isikolo esiphakeme eKompong Cham. I-Pot Pot, nangona kunjalo, ayikho umfundi ophumeleleyo kwaye uyatshintshela kwisikolo sobugcisa ukuze afunde ukuchonga.
Ngomnyaka we-1949, uPol Pot wathola i-scholarship yokufunda i-elektroniki yomsakazo eParis. Wayezidla eParis, efumana idumela njengento ebhetele, ethanda ukudansa nokusela iwayini ebomvu.
Nangona kunjalo, ngomnyaka wakhe wesibini eParis, uPol Pot wayebe ngumhlobo kunye nabanye abafundi ababenomdla ngezopolitiko.
Ukusuka kulaba bahlobo, uPol Pot wahlangana noMarxism, ejoyina i- Cercle Marxiste (iMarxist Circle yabafundi baseKhmer eParis) kunye neFrench Communist Party. (Uninzi lwabafundi abathandana naye ngeli xesha laba ngamanani aphakathi kweKhmer Rouge.)
Emva kokuba uPol Pot ehlulekile ukuvavanya iimviwo zakhe ngonyaka wesithathu ngokulandelana, nangona kunjalo, kwafuneka abuyele ngoJanuwari 1953 kwixesha eliza kuba yiCambodia.
Ipol Pot ijoyina iVi Viet Minh
Njengowokuqala weClose Marxiste ukuba abuyele eCambodia, uPol Pot wasiza ukuvavanya amaqela ahlukeneyo ekuvukeleni urhulumente waseCambodia kwaye wakhuthaza ukuba amalungu abuyela kwiCalcle ajoyine iKhmer Viet Minh (okanye iMoutakeaha ). Nangona iPol Pot kunye namanye amalungu eCalcle ayithandi ukuba iKhmer Viet Minh yayinobudlelwane obunzima neVietnam, iqela lalinomuvo wokuthi le ntlangano yenkokheli yamaKhomanisi yinto enokuthi ithathe inyathelo.
Ngo-Agasti 1953, uPol Pot washiya ikhaya lakhe ngasese kwaye, ngaphandle kokuxelela nabahlobo bakhe, waya kwiKomkhulu leNgingqi yaseViet Minh , esekelwe kwilali yaseKrabao. Inkampu yahlala ehlathini kwaye yayineentente zentsimbi ezingashukunyiswa ngokukhawuleza xa kuhlaselwa.
I-Pol Pot (kwaye ekugqibeleni i- Cercle yayo yabahlobo) yaxhalaba xa ifumanisa inkampu ngokupheleleyo, kunye neVietnam njengamalungu aphakamileyo aphezulu kunye namaCambodians ( Khmers ) anikwe imisebenzi elula. UPol Pot ngokwakhe wabelwa imisebenzi efana nokulima kunye nokusebenza kwiholo lokutya. Sekunjalo, uPol Pot wayebukele waza wafunda indlela iVi Viet Minh yayisebenzisa ngayo ipropaganda kwaye inyanzelisa ukulawula iidolophana ezihlala kwindawo.
Xa i Khmer Viet Minh iphoqelelwe ukuba ixoshe emva kwee- 1954 ze-Geneva Izivumelwano ; Pot Pot kunye nabangani bakhe abaninzi babuyela ePnom Penh.
Iingxelo ze-Geneva zika-1954 zaye zatshintsha ixesha elide loguquko lwaseCambodia kwaye zavakalisa ukhetho olunyanzelisayo ngo-1955. UPol Pot, owayesebuyela ePnom Penh, wayezimisele ukwenza konke akwaziyo ukuchaphazela ukhetho. Ngaloo ndlela wangenelela kwiDemocratic Party ngethemba lokuba unokukwazi ukubuyisela kwakhona iipolisi zayo.
Xa kwavela ukuba iNkosana Norodom Sihanouk (uSihanouk wayeyitshitshise isikhundla sakhe njengenkosi ukuze adibanise ngqo kwezopolitiko) wayegxeke ukhetho, uPol Pot nabanye baqinisekisile ukuba indlela yodwa yokutshintsha eCambodia yayiyi-revolution.
I Khmer Rouge
Kwiminyaka elandelayo emva kokhetho luka-1955, uPol Pot wabangela ubomi obini.
Ngomhla, uPol Pot wayesebenza njengomfundisi, owamangalisayo ukuba wayebathandwa ngabafundi bakhe. Ngobusuku, i-Pol Pot yayibandakanyeke kakhulu kwinhlangano yamavili yamaKhomanisi, i-Kampuchean People's Revolutionary Party (i-KPRP). ("Kampuchean" elinye igama elithi "isiCambodia.")
Ngeli xesha, uPol Pot naye washada. Ngethuba lomthendeleko wemini emithathu owaphela ngoJulayi 14, 1956, uPol Pot washada noKhieu Ponnary, udade womnye wabafundi bakhe baseParis. Esi sibini asizange sibe nabantwana kunye.
Ngama-1959, uNkosana Sihanouk wayeqale ukunyanzelisa ngokunyanisekileyo ukunyuswa kwezopolitiko zesikhokelo, ngokubhekiselele kwisizukulwana esidala sabaphikisana namava. Ngeenkokheli ezininzi ezisekuthinjweni okanye ekuhambeni, uPol Pot kunye namanye amalungu amancinci eKPRP avela njengeenkokheli kwimicimbi yeembambano. Emva komzabalazo wamandla ngaphakathi kwe-KPRP ekuqaleni kwawo-1960, uPol Pot wathatha ulawulo lweqela.
Eli qela, elibizwa ngokusemthethweni njengeCommunist Party yaseKucuchea (CPK) ngo-1966, laziwa ngokubanzi ngokuthi yiKhmer Rouge (elisho "i-Red Khmer" ngesiFrentshi). Igama elithi "Khmer Rouge" lisetyenziswe nguNkosana uSihanouk ukuchaza i-CPK, kuba abaninzi kwiCPK babini bobuKomanisi (ngokuqhelekileyo kuthiwa "iReds") kunye neKhmer.
Ukulwa kweNkosana uSihanouk Uqala
Ngo-Matshi 1962, xa igama lakhe livela eluhlu lwabantu ababefuna ukubuza imibuzo, uPol Pot wafihla. Wathatha waya ehlathini waza waqala ukulungelelanisa intshukumo ye-guerrilla eyayisekelwe ekuthinzeni urhulumente kaPrince Sihanouk.
Ngowe-1964, ngoncedo oluvela eNyakatho yeVietnam, iKhmer Rouge yasungula inkampu yenkqantosi kwimida yomda kwaye yakhupha isimemezelo esibiza umzabalazo olwaziyo ukulwa nobukumkani baseCambodia, ababebujonga njengonakele kunye nokunyanzelisa.
Iingcamango zeKhmer rouge zancincike ngeli xesha. Kwakubonisa ukuqhelaniswa kwama-Maoist ngokugxininisa kumlimi onamafama njengesiseko se-revolution. Oku kwahluke neengcamango zeMarxist esaziwayo ukuba i-proletariat (isigaba sokusebenza) yayiyisiseko sokuguqula.
IiNkundla zePol Pot IiVietnam kunye neChina
Ngo-1965, uPol Pot wayefuna ukufumana inkxaso evela kwiVietnam okanye eChina ngenxa yokuguquka kwakhe. Ekubeni umbuso wamaKhomanisi aseNyakatho yeVinternet wawungumthombo wenkxaso ye Khmer Rouge ngexesha, uPol Pot kuqala waya eHanoi ngeHo Chi Minh Trail ukucela uncedo.
Ekuphenduleni kwesicelo sakhe, iNorth Vietnam ihlaziye iPol Pot ngokuba ne-ajenda yesizwe. Ekubeni, ngeli xesha, uNkosana uSihanouk wayevumela iNyakatho yeVinternet isebenzise indawo yaseCambodia emzabalazweni wabo eMzantsi Vietnam naseMelika, iVietnam yayikholelwa ukuba ixesha alizange lilungele umzabalazo olwaziyo eCambodia. Kwakungeyona nkxalabo kwiVietnam ukuba ixesha lingazive lilungile kubantu baseCambodia.
Emva koko, uPol Pot watyelela iRiphablikhi yeSabantu yaseChina (i-PRC) waza wawela phantsi kwefuthe leNguqulelo yeNkcubeko ePhambili . I-Revolution yeNkcubeko iphinde igxininise intshisekelo yokuguqula nokunikela. Oku kufezekisile ngenye inxaxheba ngokukhuthaza abantu ukuba bachithe nayiphi na ingqungquthela yokuphuhliswa kweShayina. I-China ayiyikuxhasa ngokusobala iKhmer Rouge, kodwa yayinike uPol Pot ezinye iingcamango zokuziphendulela kwakhe.
Ngowe-1967, i-Pol Pot kunye neKhmer Rouge, nangona ikhulile kwaye isweleka inkxaso ephakamileyo, yenza isigqibo sokuqala ukuvukela urhulumente waseCambodia.
Isenzo sokuqala saqala ngoJanuwari 18, 1968. Ngalo hlobo, i-Pol Pot yayishiye ebukhosini beqela ukuba ibe yedwa umenzi wesigqibo. Waze wamisa iqela elihlukile kwaye wahlala ngaphandle kwezinye iinkokheli.
ICambodia kunye neMfazwe yaseVietnam
Inguqulelo yeKhmer Rouge yayiqhubekela phambili ngokukhawuleza kwaze kwaba neziganeko ezibini ezinkulu kwiCambodia ngo-1970. Iyokuqala yayiyimpumelelo yokubambisana ekhokelwa yiGeneral Lon Nol, eyayiphosa iNkosana uSihanouk engabonakaliyo kunye neCambodia kunye ne-United States. Okwesibini kwabandakanya umkhankaso omkhulu wokuhlaselwa ibhomu kunye nokuhlasela kweCambodia yi-United States.
Ngexesha leMfazwe yaseVietnam , iKambodia yayingathathi hlangothi ngokusemthethweni; nangona kunjalo, iVuong Cong (abaqhubi bee-guerrilla baseVietnam baseVietnam) basebenzisa loo ndawo ukuba bazuze inzuzo ngokudala iziqulatho ngaphakathi kwintsimi yaseCambodia ukuze bahlangane kunye nokugcina impahla.
Amacandelo aseMerika ayekholelwa ukuba umkhankaso omkhulu wokuqhuma ibhomu eCambodia wawuza kunqanda iVong Cong kule ngcwele kwaye ngaloo ndlela ivelise iMfazwe yaseVietnam ukuba iphele ngokukhawuleza. Isiphumo sakwaCambodia sasihlaselwa yizopolitiko.
Olu tshintsho lwezopolitiko lwenza isigaba sokunyuka kweKhmer Rouge eCambodia. Ngentambo yaseMelika e-Cambodia, uPol Pot wayekwazi ukubiza ukuba iKhmer Rouge yayilwela ukuzimela kweCambodia kunye ne-imperialism, zombini ezo zinto zazinokuthi zifumane inkxaso eninzi kubantu baseCambodia.
Kwakhona, i-Pol Pot ingavunyelwa uncedo oluvela eNyakatho yeVietnam naseChina ngaphambili, kodwa ukubandakanyeka kweCambodia kwiVietnam yaseVietnam kwakhokelela ekuxhaseni iKhmer Rouge. Ngolu xhasano olutsha oluthatywayo, uPol Pot wakwazi ukugxila ekuqeshweni nasekuqeqesheni ngelixa iNyakatho yeVietnam kunye neViong Cong yenza ininzi yokulwa.
Iimpawu eziphazamisayo zavela ekuqaleni. Abafundi kunye nabathiwa "abaphakathi" okanye abalimi abaphuculweyo babengasavunyelwa ukuba bajoyine iKhmer Rouge. Abadala abasebenzi baseburhulumenteni kunye namagosa, ootitshala kunye nabantu abanezemfundo bahlanjululwa kwiqela.
Ama-Chams, iqela elibalulekileyo eCambodia, kunye namanye amancinci baphoqeleka ukuba bathathe iindlela zokuCambodia zokugqoka nokubonakala. Izigqibo zakhishwe ukuseka amashishini agcino. Inkqubo yokukhupha indawo yasezidolophini yaqala.
Ngowe-1973, i-Khmer Rouge yayilawula okwesibini kwilizwe kunye nesiqingatha sabemi.
I-Genocide kwi-Democratic Kampuchea
Emva kweminyaka emihlanu yemfazwe yombango, uKhmer Rouge ekugqibeleni wakwazi ukuthatha inkulu-dolobha yaseCambodia, iPnom Penh, ngo-Ephreli 17, 1975. Le nto yaphelisa umbuso weLon Nol waza waqalisa ukubusa kweminyaka emihlanu yeKhammer Rouge. Kwakungoku ngeli xesha uSalot Sar waqala ukuzibiza ngokuthi "umzalwana omnye" waza wathatha uPol Pot njengegama lakhe le-war . (Ngokomnye umthombo, "Ipol Pot" ivela kumaFrentshi amagama athi "i-pottique entielle".)
Emva kokulawulwa kweCambodia, uPol Pot wabhengeza uNyaka weZero. Oku kuthetha okungaphezu kokuqalisa kwakhona ikhalenda; kwakuyindlela yokugcizelela ukuba konke okuqhelekileyo ebomini baseCambodia kwakuza kubhujiswa. Oku kwakuyi-revolution yenkcubeko eninzi kakhulu kunokuba iPol Pot yayibonile kwiChina yamaKomanisi. Inkolo yapheliswa, amaqela angabinqunywanga ukuba bathethe ulwimi lwabo okanye balandele amasiko abo, inxalenye yentsapho yaphela, kwaye ukuphikiswa kwezombusazwe kwagqitywa.
Njengomongameli waseCambodia, leyo i-Khmer Rouge ebizwa ngokuba yiDemokuchea yeDemokhrasi, i-Pol Pot yaqalisa umkhankaso onobudlova, ogacekileyo onxamnye namaqela ahlukeneyo: amalungu oorhulumente wangaphambili, oonobumba bamaBuddha, amaSulumane, abahlakaniphileyo be-Western, abafundi be-univesithi kunye nootitshala, abantu qha ga mshelana nabaNtshonalanga okanye baseVietnam, abantu abanokukhubazeka okanye abaqhwala, kunye nohlanga lwesiTshayina, uLaotians kunye nesiVietnam.
Olu tshintsho olukhulu phakathi kweCambodia kunye nokujoliswa ngqo kwezigaba ezinkulu zabemi kubakhokelela kwiCambodia. Ekupheleni kwayo ngo-1979, ubuncinane abantu abayizigidi eziyi-1.5 babulawa (uqikelelo luvela kwi-750,000 ukuya kwezigidi ezi-3) kwi "Killing Fields".
Abaninzi babethwa babulawa ngemivalo yensimbi okanye iifolo emva kokumba amathuna abo. Abanye bangcwatywa bephila. Omnye umyalelo wafundwa: "Amabhulethi angabonakali." Abaninzi babulawa yindlala kunye nezifo, kodwa mhlawumbi ama-200,000 abulawe, ngokuphindaphindiweyo emva kokuphandwa nokuhlushwa ngesihluku.
Isiko esiphenywe kakhulu sokuphenywa sisiXeko saseTuol Sleng, iS-21 (iNjongo yoKhuseleko 21), isikolo esasesikolweni esiphakamileyo. Apha amabanjwa afotshwa, aphengulwa, kwaye ahlushwa. Yayiyindawo "apho abantu bangena khona kodwa abazange baphume." *
IVietnam Intshabalalisa i-Khmer Rouge
Njengoko iminyaka ihamba, i-Pol Pot yaba yinto ephakanyiswayo ngokuphathelele ukuhlasela kweVietnam. Ukukhusela ukuhlaselwa, umbuso wePol Pot waqalisa ukuhlaselwa nokubulawa kwabantu kwiindawo zaseVietnam.
Esikhundleni sokukhubaza iVietnam ukuba ihlasele, le nto ihlasela iVietnam ibe negalelo lokuhlasela iCambodia ngo-1978. Ngomnyaka olandelayo, iVietnam yayiye yahambisa iKhmer Rouge, iphelisa umbuso weKhmer Rouge eCambodia kunye nemigaqo-nkqubo yezobuhlanga yasePol Pot .
Ukukhutshwa ngamandla, iPol Pot kunye neKhmer Rouge yabuyela kwindawo ekude eCambodia ngasemngceleni waseThailand. Kwiminyaka emininzi, iNorth Vietnamese yaseMelika yayibekezelela ukuba khona kweKhmer Rouge kule ndawo yomda.
Nangona kunjalo, ngo-1984, iNyakatho yeVinternet yenza umzamo owenziwe ngokubambisana nawo. Emva koko, iKhmer Rouge yasinda kuphela ngenkxaso yeChina yamaKhomanisi nokunyamezela urhulumente waseThai.
Ngowe-1985, uPol Pot washiya njengenhloko yeKhmer Rouge waza wanikela imisebenzi yakhe yolawulo kwansuku zonke, uSan Sen Pol Pol Pot akazange aqhubeke njengenkokheli yeqela.
Ngo-1986, umfazi omtsha kaPol Pot, uMe Son, wazala intombi. (Umfazi wakhe wokuqala waqala ukugula ngenxa yokugula kwengqondo kwiminyaka ngaphambi kokuba athathe amandla njengoPol Pot. Wafa ngo-2003
Ngomnyaka ka-1995, uPol Pot, ehlala esecaleni komda waseThai, wahlushwa isifo esashiya icala langasekhohlo lomzimba wakhe ukhubazekile. Kwiminyaka emibini kamva, uPol Pot wayenomntwana uSen kunye namalungu oonyana bakaNyana kaSafa ngenxa yokuba wayekholelwa ukuba uSen uzame ukuxoxisana noRhulumente waseCambodia.
Ukufa kukaNyana uSen kunye nentsapho yakhe bayatshitshisile ininzi inkokheli yaseKhmer esele. Ecinga ukuba i-paranoia yePol Pot yayingenakulawula kwaye ixhalabile ngobomi bayo, iinkokheli zaseKhmer Rouge zambamba iPol Pot zambeka ecaleni lokubulala iNyana kaSin namanye amalungu eKhmer Rouge.
I-Pol Pot yagwetywa ukuboshwa indlu ngenxa yentsalela yobomi bayo. Akazange ajeziswe kakhulu ngenxa yokuba wayevelele kakhulu kwiindaba zeKhmer Rouge. Amanye amalungu asele enkampanini aphendule le ngonyango.
Kuphela konyaka kamva, ngo-Ephreli 15, 1998, i-Pol Pot yakuva ukusasazwa kwiLizwi laseMelika (apho wayengumphulaphuli othembekileyo) wamemezela ukuba iKhmer Rouge ivumile ukuyibuyisela enkundleni yamazwe ngamazwe. Wafa ngaloobo busuku.
Amahemuhemu aqhubekayo ukuba azinikele okanye abulawe. Umzimba wePol Pot wawusitshiswa ngaphandle kwe-autopsy ukuseka imbangela yokufa.
* Njengoko kucatshulwe ku- S21: Umshini wokubulala iKhmer Rouge (2003), ifilimu yomboniso
UPapa uBenedict II
I-Biography yeSaddam Hussein
32 Ronald Reagan Quotes Ufanele Uyazi
Imbali yeTimmerman Telegram
Indlela iBrainstorming Inokukunceda njani Ukuvelisa, Ukugxininisa, kunye Nokuhlela Iingcamango zokuBhala
Pedro Alonso Lopez: I-Monster ye-Andes
I-Emulsion Definition kunye nemizekelo
Ukuhamba kweMidlalo yokuKhuphela kwamanzi
I-Beloit College Admissions
Indlela yokudala iTharthi kwi-Microsoft Excel
Umbuzo weMoto weHyibrid: Ngaba i-Car Car Defective?
Incwadi enkulu yamaProfeti abaMormon
Oko Ukwenza Ukuba Ufumana I-Squirrel Baby
Iimveliso kunye nemiSebenzi yeziThuthi zoBuqu
Uhlobo lweZintetho zoLuntu
Iqumrhu leCult eWaco, Texas
Ukuphela kweeNcwadi zoKhuseleko lweNtlalo
Rufus Stokes: IQela loMoya ococekileyo
Izinto ezili-10 zokumazi ngo-Andrew Johnson
Abaviwa abaPhezulu abaPhambili be-De-Extinction
Izihloko eziqhelekileyo zeziFundo zeeNgcaciso zeZikolo zeeSikolweni
I-Aufbau Principle - Ulwakhiwo lwe-elektroniki kunye ne-Aufbau Principle
Ukunciphisa kwiNgxelo zeNcwadi zeNgxelo zexesha